Seix-Barral nhau dzaGunyana, Gumiguru naNovember | Zvazvino Zvinyorwa
Seix-Barral nhau dzaGunyana, Gumiguru naNovember
Carmen Guillen | | Zvinyorwa, Mabhuku, Literature
La Edhisheni Seix-Barral, rakaburitsa zvichave zvimwe zve nhau dzekunyora kwemwedzi waGunyana, Gumiguru naNovember. Vanouya vakaremerwa nenhau dzakanaka dzatinotarisira kukuzivisai pano nemafungiro kubva kumapepanhau nevanyori vakasanganisirwa.
Kana iwe uchida kuziva nezve edhiyo nhau uye / kana Seix-Barral iri pakati peavo vaunofarira vaparidzi, usarega kuverenga chinyorwa ichi.
1 Nhau - mazita nemwedzi
2 Bhuku nebhuku, maonero nemaonero
2.1 "Nzira yeImbwa" naSam Savage
2.2 "Kudanidzira muRwizi" naJu Hua
2.3 «Zvinonyadzisa sei» naPaulina Flores
2.4 2084. Kuguma kweNyika »naBoualem Sansal
2.5 Rangarira kuti uchafa. Rarama »naPaul Kalinithi
2.6 "Ndiri pano" naJonathan Safran Foer
2.7 "Basa rechinomwe remutauro" naLaurent Binet
2.8 "Pakati penyika neni" naTa-Nehisi Coates
2.9 «Hupenyu huri nani» naAnna Gavalda
2.10 "Nguva yekumuka pamwe chete" naKirmen Uribe
2.11 "Akanaka Annabel Lee" naKenzaburo Oé
2.12 "Nzira imwe. Pedzisa nhetembo »naErri de Luca
2.13 "Nyaya yaIrene" naErri de Luca
Nhau - mazita nemwedzi
"Nzira yembwa" naSam Savage.
"Mhere muchimvura" naJu Hua.
"Zvinonyadzisa sei" rakanyorwa naPaulina Flores.
2084. Kuguma Kwenyika " NaBoualem Sansal.
Rangarira kuti uchafa. Inorarama " naPaul Kalanithi.
"Ndiri pano" naJonathan Safran Foer kana tiine ruzivo.
"Basa rechinomwe remutauro" rakanyorwa naLaurent Binet
"Pakati penyika neni" naTa-Nehisi Coates.
"Hupenyu huri nani" rakanyorwa naAnna Gavalda.
"Nguva yekumuka pamwe chete" yakarohwa naKirmen Uribe.
"Akanaka Annabel" NaLee Kenzaburo Oé.
"Nzira imwe. Nhetembo dzakakwana » yakapihwa naErri de Luca.
"Nyaya yaIrene" yakapihwa naErri de Luca.
Bhuku nebhuku, maonero nemaonero
"Nzira yembwa" naSam Savage
Harold Nivenson mupendi mudiki, mutsoropodzi, uye mubatsiri anofunga nezve rake basa. Izvo zvinotanga sekurambwa kwerumwe rudzi rwehunyanzvi uye hasha dzinovava kumhuri yake zvinopa nzira yekunzwa runyararo rwemukati sezvaanobuda mumumvuri wekare uye achitsvaga chikonzero chekurarama mune ino. Pamwe hupenyu - hwakafanana nehunyanzvi - haufanire kuyerwa nekubudirira; pamwe isu tinofanirwa kutsvaga zvidimbu zvisipo pakati pezvikanganiso zvedu nematongo ayo, nekuda kwavo, atinogara.
Nzira yembwa chidzidzo cheunyanzvi uye hupenyu. Sam Savage anotora nenzira inoshamisa misoro inoverengera ake enganonyorwa dzekare: kusurukirwa, kuzvidemba uye kuputsa zviroto. Uye, ichibhururuka pamusoro pezvese, zvinyorwa.
"Ine elegiac, inotaura uye yakanyanya nyaya nezve zvinoreva muimbi", Vaparidzi Vhiki.
Savage akanyora hunyanzvi hwake; yakasimba uye yakasarudzika, yakanaka uye panguva imwe chete inorwadza kuongororwa kweyakare inopfidza njere », Iyo Star Tribune.
"Kugona kwaSavage kugadzira mavara akaomarara vachishandisa izwi ravo chete", Los Angeles Times.
"Mhere muchimvura" naJu Hua
Pakutanga rakaburitswa muna 1992,"Mhere muchimvura" inyaya inoshungurudza yekutanga-munhu kupona nyaya iyo inotsanangudza iyo inoshungurudza chiitiko chemhuri yekumaruwa China; chinokonzeresa chinokonzeresa chemafungiro emhuri erudzi rwenababa rwakakuvadzwa zvinouraya, rwunotitungamira kuenda kumatambudziko anoshamisa emunhu munharaunda mushanduko izere.
"Iri bhuku rekutanga raYu Hua ipikicha yakaunganidzwa yekurwadziwa nekupona", Kirkus Ongororo.
Zvinyorwa zvaYu Hua hazvifadzi. Kunyangwe zvakadaro, mune zvidimbu zvakanyanya kunetsa, iye anokwanisa kupa chiitiko nekuseka. Kuverengwa kwakakurudzirwa kune vakawanda vateereri ", Raibhurari Zvinyorwa.
"Zvinonyadzisa sei" rakanyorwa naPaulina Flores
Vakadzika vepakati vanozadza idzi pfumbamwe nyaya dzinoitika mumigwagwa yenharaunda dzepedyo, mumaguta echiteshi, mumatombo ezvivakwa kana pamusuwo weraibhurari. Hapana munhu anotanga kubva pakutanga: kune avo vanoenda kunotsvaga basa, avo vanotsvaga vavakidzani, vanosangana neshamwari yekare kana kuronga kupamba. Rondedzero yacho inosvika kune vese pasina yambiro, muhusiku hwehupenyu.
Mune ino vhoriyamu inokatyamadza, iyo yenguva pfupi umo kusava nemhosva kwakasiiwa kumashure, iyo nguva yekuzarurirwa umo zvese zvinoshanduka, zvinosanganiswa, zvisina mutambo, pamwe nemamiriro ezvinhu ezuva nezuva ane zvakavanzika zvavo.
"Inzwi rakanyanya uye rinodiwa", Patricia Espinosa. Nhau dzichangoburwa.
"Bhuku rakakura uye rakakura mhando", Pedro Gandolfo, The Mercury.
2084. Kuguma Kwenyika " NaBoualem Sansal
Muhumambo hukuru hweAbistan hutongi hwehudzvanyiriri hwakavakirwa pakuzviisa kuna mwari mumwechete anotonga zvese; chero kufunga kwepamoyo kwakabviswa, uye kwese kwese kuongorora system inobvumira huwandu hwevanhu kudzorwa. Ati, gamba redu, anoedza kunzwisisa hutongi hwehudzvanyiriri nekutsvaga vapanduki, vanhu vanogara vatorwa kune chitendero, uye vanoita rwendo rurefu nemurenje vachitsvaga chokwadi.
"Chitendero chingaite kuti Mwari vade, asi hapana chakafanana nacho kuita kuti vanhu vavenge uye kuvenga vanhu." Ndiwo matangiro anoita 2084. The End of the World, ngano yevaOrwellian iyo inosekesa kushungurudzwa uye hunyengeri hwehutongi hwechitendero hunotyisidzira democracy. Nyika ingave yakaita sei kana vakunda? Iyi nhoroondo inotipa mhinduro.
"Rakavara dema, rinotyisa, rakanyatsojeka zvekuti rinopa vertigo", Point.
`` Inoverengeka yakasarudzika uye izwi re alarm '', Telerama.
"Zvinotyisa sezvazviri chiporofita", Verenga.
Rangarira kuti uchafa. Inorarama " naPaul Kalinithi
Pazera ramakumi matatu namatanhatu, uye kuda kupedza makore gumi ekugara kuti awane chinzvimbo chenguva dzose seveveurosurgeon, Paul Kalanithi akaonekwa aine gwere IV gomarara remapapu. Akaenda kubva pakuva chiremba achirapa zviitiko zvekupedzisira kumurwere ari kunetseka kurarama.
Rangarira kuti uchafa. Vive chiratidzo chisingakanganwiki nezve zvinoreva hupenyu hwedu. Kufungisisa uye kuzvizadza-kuzadza kunoratidza simba rekunzwira tsitsi; kugona kusingagumi kwesimba remunhu kuti ape zvakanakisa zvake kana akatarisana nezvaanotya zvakanyanya.
"Kubaya. Uye yakanaka. Ndangariro dzachiremba wechidiki Kalanithi ndihwo humbowo hwekuti iye anoziva kuti achazofa ndiye anotidzidzisa zvakanyanya nezve hupenyu », Atul Gawande, munyori we "Kuva Munhu Anofa."
"Kufungisisa kwakanaka uye kunobva pamoyo pamusoro pesarudzo dzinokutungamira kuti ude hupenyu kunyangwe kana rufu rwave pedyo", Booklist.
"Ndiri pano" naJonathan Safran Foer
Jonathan Safran Foer atora anopfuura makore gumi kuti apedzise ino huru nhoroondo ino gadzirisa dambudziko remifungo inoonekwa seinoyera, senge mhuri, imba, tsika kana basa redu munharaunda. Kudzidzira kwekunyora kwekudzidzira, dzimwe nguva kusingaremekedze, kunonoka, uye kuseka senge mutambo wepa terevhizheni, uye kune vamwe, kudzika kusingaperi uye kusingaregereri muchikamu chakaipisisa chedu.
Kudengenyeka kwenyika kunotyisidzira kubvarura Jacob Bloch. Haasi kuenda panguva yake yakanakisa, kana sababa kana semurume, kana seAmerican muJudha, kunyangwe pamakumi mana nematatu izvi hazvibvise hope. Imba yake iri kudzikira uye vana vake vatatu havachamudi: vane hunyanzvi hutsva hwekutarisa kunze kwenyika. Uku kukamukana kunopararira pasirese pasvika imwe kudengenyeka kwenyika kuchirova kuMiddle East uye Jacob anofanira kusarudza nzvimbo yake pasi.
Ruoko rwaFoer haridedere kana uchigadzirisa nyaya dzakaomarara uye zvazvinoreva. Kuseka kwake kwakasviba kunopinza nhaurirano uye kushushikana kunozadza mazwi ake nezvekusurukirwa kwehukama hwevanhu uye nenyika yakakamurwa neruvengo rwemadzinza. […] Munyori ane chipo chechipo chekutifambisa », Vaparidzi Vhiki.
"Nyaya yezvinetso zvemhuri yaJonathan Safran Foer ndeyekusaremekedza, polyphonic uye yakajeka mutambo unogumira pakuwedzeredza, uchitarisana pachena nekugona kwevanhu uye kuseka, kwehutsinye uye rudo", Booklist.
Yechinomwe basa remutauro ibhuku rakangwara uye rine hunyanzvi iro rinofungidzira kuuraya kwaRoland Barthes semufananidzo, akatakurwa nesvomhu yezvematongerwo enyika uye zano reutikitivha. Sezvazvakaita muHHhH, Binet inosanganisa chokwadi chaicho, zvinyorwa uye mavara ane fungidziro yekuvaka yakasimba uye inonakidza ngano pamusoro pemutauro uye simba rayo kutishandura.
Musi waKurume 25, 1980, Roland Barthes akaurayiwa nemotokari. Vanovanda vekuFrance vanofungidzira kuti akaurayiwa, uye Inspector Bayard, murume anochengetedza zvakanyanya, ndiye anotungamira kuferefetwa uku. Pamwe chete nevechidiki Simon Herzog, mutevedzeri purofesa kuyunivhesiti uye kuruboshwe-bapiro inofambira mberi, anotanga kuferefeta kunozomutungamira kubvunza vanhu vakaita saFoucault, Lacan kana Althusser, uye kuti aone kuti nyaya iyi ine chinoshamisa pasirese .
«Rinovhiringidza, pop uye rinoshatisa runyorwa pakati peKurwa Club, Zita reRose neTíntín munyika yeFrance Dzidziso.», Les Inrock.
"Delirious structuralist mutikitivha inoedza kujekesa kufa kwaRoland Barthes", Le Nouvel Observateur.
"Pakati penyika neni" neTa-Nehisi Coates
Tsamba kubva kuna baba ichienda kumwanakomana wavo. Kufungisisa kwakadzama pamusoro pehunhu hwemagariro eNorth America yanhasi iyo inosanganisira nyaya hombe dzenyika dzese dzakadai serusarura, kusaenzana uye nehunhu hunodiwa kuti urwise.
"Pakati penyika neni monologue ane chisimba seicho chaicho chevazhinji vemuAfrica maAmerican uye anofunga uye anononoka semabhuku ese emunyori akapedza hupenyu hwake achiedza kunzwisisa chokwadi chakamukomberedza", Nyika.
"Nyaya ine simba yeyakare yababa uye ramangwana remwanakomana ... Chipupuriro chinofamba uye chine simba", Kirkus Ongororo.
"Hupenyu huri nani" rakanyorwa naAnna Gavalda
Maitiro asingakanganisike aAna Gavalda anoshandura idzi mbiri dzinonaka kuita dombo diki rinotiratidza kuti matiri tese, zvisinei nekuti dzimwe nguva tinonzwa seisingakoshi, kune mhodzi yekuda, kushinga uye hukuru.
Mathilde naJann vane zvakawanda zvakafanana. Ivo vaviri vanovenga hupenyu hwavo. Kushaikwa kwebasa rakanaka kunowedzera kushushikana kwavo uye hukama hwavo hwerudo idambudziko rakazara. Rimwe zuva, anorasa bhegi rake mune yekudyira, uye mutorwa anoidzosa, pamusoro pekushandura rombo rake, achachinja hupenyu hwake. Yann achaonawo ramangwana rake richipidiguka mushure mekudya kusingatarisirwi nevavakidzani vake, mavanoziva kushingairira kwaanotsvaga.
«Anna Gavalda anotitora isu kupinda muchadenga chake, uko kudiki kwazvo kwenzvimbo zvakare kwakanyanya kukosha. Gavalda anotifambisa nehutsva hwake uye tariro. Anogara aine hunyanzvi hwekujekesa kusviba kwenyika nemazwi », L'Indépendant.
"Ndaida. Nechirevo chake chinopinza, Gavalda anorova nguva yedu. Akanyora bhuku hombe pamusoro pekushungurudza uye kusuruvara kwekusurukirwa. Basa rinoshamisa », Telematin.
"Nguva yekumuka pamwe chete" naKirmen Uribe
Iyo Nguva Yekumuka Pamwe chete inyaya yemukadzi akararama kutaurira vatapwa vakati wandei, avo zvirongwa zvakaderedzwa nezvakaitika zviitiko izvo zvakatsanangura mugumo wezvizvarwa zvakati.
Karmele Urresti anoshamiswa nehondo yevagari vemunyika yake yekuOndarroa. Pakupera kwehondo akaenda kuFrance. Ikoko anosangana nemurume wake, muimbi Txomin Letamendi, uye pamwe chete vanotizira kuVenezuela. Asi Nhoroondo inopinda muhupenyu hwake zvakare. Kana Txomin afunga kujoinha zvechiBasque zvakavanzika masevhisi, mhuri inodzokera kuEurope, kwaanotungamira basa rehusori kurwisa maNazi kudzamara asungwa muBarcelona. Karmele achafanirwa kutora njodzi ndokusiya, ega panguva ino, aine tariro isingaone yemumwe munhu anosiya izvo zvakakosha kwazvo.
«Pedyo zvikuru ne aesthetics yaEmmanuel Carrère naiye De Lives weVamwe, uye JM Coetzee weThe Petersburg Master», Jon Kortazar, Babelia.
"Chaizvoizvo chazvino ... saEmmanuel Carrere, WG Sebald, JM Coetzee naOrham Pamuk", Maodzanyemba.
"Iine hunhu husingawanzo kushandira tsika pasina kuita kuti huite senge hwevanhu, uye hwekuve hwazvino pasina kusiya izvo zvaive pamberi", P. Yvancos, ABCD Unyanzvi uye Tsamba.
"Akanaka Annabel Lee" rakanyorwa naKenzaburo Oé
Akanaka Annabel Lee anokumbira, kubva kuzita rake, musikana-mukadzi akadanana naPoe uye anotsvaga mukurwadziwa uye nenjodzi inowanzo fambidzana, sekutuka kwekare, kusava nemhosva uye runako. Mune ino novel, yekutanga umo Kenzaburo Oé anounza mukadzi wechikadzi mukuru, wechiJapan anoongorora zvinehunyanzvi madingindira ake akajairika: hushamwari, hunyanzvi, kuzvipira mune zvematongerwo enyika.
Semwana mudiki, Sakura akaisa nyeredzi mumutambo wefirimu wenhetembo yaEdgar Allan Poe Annabel Lee, zvichiratidza kutanga kwebasa rakabudirira. Makore gare gare, akashandurwa kuita mutambi wepasi rese, anozivikanwa kubva kuHollywood kuenda kune yake yekuJapan, anotanga nemunyori Kensanro uye mugadziri wefirimu Komori mukuunza kumukira kwevarombo kuchiratidziro chikuru. Izvo Sakura aisakwanisa kufungidzira ndezvekuti panguva yekutora mafirimu aipedzisira achirangarira chiitiko chinoshungurudza kubva paudiki hwake.
"Munyori anonyanya kufadza, anonyanya kukosha munyika yake", Enrique Vila-Matas.
"Musoro wezvinyorwa zvechiJapane zvemazuva ano unowanikwa muKenzaburo Oé"Yukio Mishima.
"Nzira imwe. Nhetembo dzakakwana » rakanyorwa naErri de Luca
Solo ida anounza pamwechete kekutanga muvhoriyumu imwe nhetembo dzaErri De Luca, mune yemitauro miviri uye kududzirwa naFernando Valverde. Iri rakasarudzika uye risingaperi basa, rizere nenguva dzakanaka uye nesimba guru, iro rinoratidza chokwadi nekunzwa kwakasimba uye kusina hunyanzvi hwese.
«Baba vangu vaive nekodhi yenhetembo dzaLorca […]. Achibvisa giramufomu, aiverengazve ndima dzacho. Vairidza senge kurova kwemoyo, vaifamba nhanho dzeshangu nyowani, dzaimenya nekunhuwirira kweganda. […] Kubva ipapo, nhetembo ine izwi rinozvigadzika mumadehenya evaya vanoiverenga. […] Mavhesi angu akashandurwa mumutauro waLorca anondidzosera mukamuri muNaples, umo mwana akanyarara aidzidza syllable mavhesi emudetembi wechiSpanish », Erri De Luca.
«De Luca mudetembi uye haatyi chero chinhu, kana manzwiro akanaka kana kubvumirwa kwechakanaka kana chakaipa; chakakosha chinhu chisingafungidzike kupenya, ndangariro dzinoputika pamberi pemeso avo, fungidziro inopa chirevo ", Il Tempo.
«Iye chete munyori wechokwadi wechikwata icho parizvino chakapa XXI century", Corriere della Sera.
"Nyaya yaIrene" rakanyorwa naErri de Luca
Ichi chinopenya katatu mundangariro nekukanganwa chinotanga nengano isina hunhu iyo inogona kuoneka mune chero muunganidzwa wengano dzechiGiriki; mutambi mukuru, Irene, ane hunhu hunoshamisa hwezvisikwa zvemashiripiti. Idzi nyaya mbiri dzinokatyamadza dzinotevera dzinoratidza hunhu hwemunhu, anokwanisa kuumba hunhu hwake hwakanaka mumamiriro akashata.
Gungwa nenyika zvinotarisana nechitsuwa chakazadzwa nezuva uye chakakundwa nenyeredzi. chishamiso uye hutsinye nzvimbo isingagamuchire chakavanzika chakavanzika chaIrene. Achaburitsa nyaya yake inonakidza kumunyori weNeapolitan, munyori wekupedzisira wenyaya yaIrene.
"Chiedza chakajeka chinotiyeuchidza kuti Erri De Luca ndomumwe wevanyori vakakura vezvinyorwa zvepasi" Books Hebdo.
"Bhuku rakasimba kwazvo", Tuttolibri, La Stampa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Seix-Barral nhau dzaGunyana, Gumiguru naNovember
Ngano, isu tine dambudziko: rusaruraganda
Mhepo dzechando, kunyangwe ivo vapepeti havana chavanoziva